D K – See More…
Category: D K
မြန်မာတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဝါထပ်ရခြင်းအကြောင်းနှင့် ၀ါကြီးထပ် ၀ါလေးထပ် ဆိုတာ
January 28, 2022 Anonymous
မြန်မာတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဝါထပ်ရခြင်းအကြောင်းနှင့် ၀ါကြီးထပ် ၀ါလေးထပ် ဆိုတာ ကမ္ဘာက နေကို လှည့်ပတ်ရာ၌ ၃၆၅ရက် ၆နာရီ ၁၂မိနစ် ၃၇စက္ကန့် ကြာ၏။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်နှစ် တစ်နှစ်ကို၃၆၅ရက်ထား၏။ ၆နာရီအစွန်းအတွက် ၄နှစ်တစ်ကြိမ် တစ်ရက်တိုး၏။ မြန်မာက ၂၉ရက်ကို၆လ ၃၀ရက်ကို ၆လ ထားသဖြင့်
မတညျ့တာကိုမှ စားခငျြတယျ စားပွီးရငျ တခုခု ဖွဈပွီဆိုရငျ ဒါလေးမှတျထားနျော..
မတညျ့တာကိုမှ စားခငျြတယျ စားပွီးရငျ တခုခု ဖွဈပွီဆိုရငျ ဒါလေးမှတျထားနျော မတညျ့တာကိုမှ စားခငျြသူမြားအတှကျ အန်တရာယျကငျးအောငျ စားနညျးမြား ၁။ လကျဖကျကို အမွဲနိုငျတာ လြှကျဆားဖွဈပါတယျ။ အစာမကွေ၊ လပှေ၊ ရငျပွညျ့ရငျကယျ မဖွဈအောငျ လကျဖကျသုပျစားပွီး ၁၅ မိနဈခနျ့ကွာရငျ လြှကျဆား၊ ကိုးပါးဆေး၊ မဟာဖွဆေေး စတဲ့
ကိုယျ့နား မှာ အဲ့လိုမြိုး အပေါကျလေးပါတယျဆိုရငျတော့ ကြျောမသှားသငျ့တဲ့ ပို့ဈလေးပါ(ဖတျဖွဈအောငျဖတျပါ)
ကိုယျ့နား မှာ အဲ့လိုမြိုး အပေါကျလေးပါတယျဆိုရငျတော့ ကြျောမသှားသငျ့တဲ့ ပို့ဈလေးပါ(ဖတျဖွဈအောငျဖတျပါ) သငျ့ရဲ့ နားရှကျ ဝနျးကငျြမှာ သဘာဝ အတိုငျး မှေးရာပါ အပေါကျလေးပါနရေငျ အငျမတနျမှ ရှားပါတဲ့သူဖွဈလို့ ဂုဏျယူလိုကျပါတော့၊ ဒါပမေယျ့ ဒီအပေါကျလေးက အန်တရာယျလညျး ရှိနိုငျတယျဆိုတာ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။ ဒီလို နားရှကျနားမှာ အပေါကျပါသူတှဟော တဈကမ်ဘာလုံး
D K Religion
သခေါနီးလူကို အားပေးစကားပွောနညျး (၄) နညျး သခေါနီးလူကို အားပေးစကား ပွောနညျး (၄) နညျး လူတှဟော အနတေတျဖို့ လိုသလို အသတေတျဖို့ လိုသေးတယျ တဲ့။ ဒါကွောငျ့ မွတျစှာဘုရားက ဒီသုတ်တနျမှာ နမေကောငျး ထိုငျမသာဖွဈပွီးတော့ ရောဂါဝဒေနာဖွဈနတေဲ့
D K ကွားသိသမြှ
လူသိနည်းပြီး တန်ဖိုးကြီးမား အလွန်ရှားပါးသော မြန်မာ့တောတောင်အတွင်းရှိ အရာများ
မြန်မာ့တောတောင်များ အတွင်းမှာရှိတဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားပြီး ရှားပါးထူးဆန်းတဲ့ အရာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းတွေဟာ တဖက်နိုင်ငံက တရားမဝင် ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုတွေကြောင့် အတော်များများ ပျက်စီးပျောက်ဆုံး ကုန်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပုံမမြင်ဘူးသူများ မြင်ဖူးစေရန်အတွက် ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ညောင်နီပင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တောထဲတွင်
လက်အမျိုးသမီးများအဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ဒူး၊ခါး၊လက်တို့နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာဆိုးကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့်ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဂွေးတောက်ရွက်အနည်းငယ်ကိုထောင်းထွက်လာတဲ့အရည်နဲ့သနပ်ခါးကိုသွေးဒူးကနေစပြီးခြေဖြားအထိလိမ်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ရောဂါအနုအရင့်အလိုက်နေ့စဉ်ရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ်၊ညအိပ်ရာဝင်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်ဆို့သိသိသာသာပျောက်ကင်းလာပါလိမ့်မယ်ကိုနိုင်ဆိုသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာတစ်နေကုန်မိုးမိပြီးဒူးအဆစ်ရောင်ပြီးကိုက်ခဲသွားပါတယ်ဆေးပေါင်းစုံလိမ်းစမ်းကြည့်ပေမယ့်လည်းသက်သာသလိုလိုနဲ့မကောင်းဘူး ဖြစ်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးရေအိမ်ဝင်တာတောင်မထိုင်နိုင်မထနိုင်နဲ့တော်တော်လေးဆိုးနေတာကိုမြင်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဂေါက်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူ့အမျိုးသမီးကိုထိုးဆေးနည်းနဲ့ကုပေးရာကသက်သာ ပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့ပြောလာပါတယ်စမ်းကုကြည့်ပါဆိုတာနဲ့ကုကြည့်လိုက်တာတကယ်သက်သာပျောက်ကင်းလာတာကြောင့်အလားတူဝေဒနာရှင်များကို သက်သာစေချင်တာမို့ဂွေးတောက်နဲ့သနပ်ခါးဆေးနည်းကိုတင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်ဂေါက်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက်ခွေးတောက်နှင့်သနပ်ခါးဆေးနည်းမှာခွေးတောက်ရွက်ကိုရေအနည်းငယ်နှင့်ထောင်းပါ၎င်းအရည်နှင့်သနပ်ခါးကိုသွေး၍ဒူးမှစ၍ခြေဖျားထိလိမ်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည် ရောဂါအနုအရင့်အလိုက်နေ့စဉ်ရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ်ညအိပ်ယာဝင်တစ်ကြိမ်လိမ်းပေးပါသိသာစွာသက်သာလာပါမည်စာဖတ်သူမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးထားသည်ကိုဖတ်၍ဗဟုသုတအဖြစ်မှတ်သား စရာတစ်ခုခုကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိမှာပါအခြားသူများလည်းသိစေရန်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးကုသိုလ်ယူပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် Credit…. မူရင်းရေးသားသူ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဒူး၊ခါး၊လက်တို့နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ဂေါက်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက်ဆေးနည်းတစ် လက်အမျိုးသမီးများအဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ဒူး၊ခါး၊လက်တို့နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာဆိုးကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့်ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဂွေးတောက်ရွက်အနည်းငယ်ကိုထောင်းထွက်လာတဲ့အရည်နဲ့သနပ်ခါးကိုသွေးဒူးကနေစပြီးခြေဖြားအထိလိမ်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ရောဂါအနုအရင့်အလိုက်နေ့စဉ်ရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ်၊ညအိပ်ရာဝင်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်ဆို့သိသိသာသာပျောက်ကင်းလာပါလိမ့်မယ်ကိုနိုင်ဆိုသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာတစ်နေကုန်မိုးမိပြီးဒူးအဆစ်ရောင်ပြီးကိုက်ခဲသွားပါတယ်ဆေးပေါင်းစုံလိမ်းစမ်းကြည့်ပေမယ့်လည်းသက်သာသလိုလိုနဲ့မကောင်းဘူး ဖြစ်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးရေအိမ်ဝင်တာတောင်မထိုင်နိုင်မထနိုင်နဲ့တော်တော်လေးဆိုးနေတာကိုမြင်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဂေါက်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူ့အမျိုးသမီးကိုထိုးဆေးနည်းနဲ့ကုပေးရာကသက်သာ ပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့ပြောလာပါတယ်စမ်းကုကြည့်ပါဆိုတာနဲ့ကုကြည့်လိုက်တာတကယ်သက်သာပျောက်ကင်းလာတာကြောင့်အလားတူဝေဒနာရှင်များကို သက်သာစေချင်တာမို့ဂွေးတောက်နဲ့သနပ်ခါးဆေးနည်းကိုတင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်ဂေါက်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက်ခွေးတောက်နှင့်သနပ်ခါးဆေးနည်းမှာခွေးတောက်ရွက်ကိုရေအနည်းငယ်နှင့်ထောင်းပါ၎င်းအရည်နှင့်သနပ်ခါးကိုသွေး၍ဒူးမှစ၍ခြေဖျားထိလိမ်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည် ရောဂါအနုအရင့်အလိုက်နေ့စဉ်ရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ်ညအိပ်ယာဝင်တစ်ကြိမ်လိမ်းပေးပါသိသာစွာသက်သာလာပါမည်စာဖတ်သူမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးထားသည်ကိုဖတ်၍ဗဟုသုတအဖြစ်မှတ်သား စရာတစ်ခုခုကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိမှာပါအခြားသူများလည်းသိစေရန်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးကုသိုလ်ယူပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်
အဝတ်လျှော်စက်တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်သော အဝတ်လျှော်နည်း အမှား (၇) ခု
အဝတ်လျှော်စက်တွေ ပေါ်လာတာဟာ လူတွေကို အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်းကို လျော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း သက်သာတာကြောင့် အိမ်တိုင်းနီးပါးမှာ အသုံးပြုနေကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အဝတ်လျှော်စက် နဲ့ အဝတ်လျှော်သူတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်…။ (၁) ပိုးသတ်ဆေးပါတဲ့ ဆပ်ပြာကို မသုံးခြင်း သင့်မိသားစုဝင်တွေ တခါတလေမှာ ဖျားနာတာတွေ
ဘာချက်ရမလဲတွေးပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့အိမ်ရှင်မများ အတွက် (၅၉) ရက်စာ ဟင်းလျာ
(၁). ကြက်သားအာလူးဟင်း+ပဲကုလားဟင်း+ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် (၂). ငါးမွှေ+ဂေါ်ရခါးသီးချဉ်ရည်+ ငရုပ်ပွကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် (၃).ငါးဖယ်ငါးဆုတ်+ကျောက်ဖရုံသီး ချဉ်ရည်+ရုံးပတီသီးကြော်+ငါးပိထောင်း (၄).ပုစွန် ဆီပြန်+ ကန်ဇွန်းရွက်ချဉ်ရည် + ပန်းဂေါ်ဖီကြက်ဥ+ငရုပ်သီးဆားထောင်း (၅). ဘဲဥဆီပြန်+ ပဲရွက်ဟင်းချို+ ကင်းပုံသီးချက်+ ငံပြာရည်ချက်+တို့စရာ (၆). ပုစွန်ဘော့ချိတ်+ ဂေါ်ရခါးသီး အချိုချက်+မြင်းခွာရွက်သုတ်+ငါးပိချက် (၇).ဝက်သနီချက်+ဘူးသီးချည်ရည်
အရင်ကတော့ သတိမထားမိဘူး အခုတော့ အသိပေးလိုက်ပါရစေ “အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အိမ်မြှောင်ချေး အကြောင်း”
“လူတွေ သတိမထားမိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အိမ်မြှောင်ချေး အကြောင်း” အိမ်မြှောင် ချေးတစ်ခုမှာဆိုရင် ထိပ်မှာကပ်လျက်ရှိနေတဲ့ အဖြူရောင်အစေ့လေးကို သိသိသာသာ မြင်ကြရမှာပါ။ အိမ်မြှောင် ချေးတုံးလေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲရင် အောက်ဘက်မည်းနေတဲ့အပိုင်းက မစင်ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်က အဖြူရောင် အစေ့လေးက ဆီးဖြစ်ပါတယ်။ လူအပါအဝင် တော်တော်များများသတ္တဝါတွေမှာ ဆီးကို အရည်အဖြစ်နဲ့သွားပေမယ့် အိမ်မြောင်တွေကတော့ အခဲပုံစံနဲ့သွားကြပါတယ်။ အဲ့သည်အဖြူရောင်လေးဟာ
ကနျြးမာရေးအတှကျ စားသုံးဖို့ မသငျ့တျောတဲ့ ငါး အမြိုးအစား (၅) မြိုး
January 26, 2022 Anonymous
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ အချို့သော ငါးအမျိုးအစားတွေက ခန္ဓွာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါးစားသုံးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပြီးလူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရ ဓာတ် တွေကို ပေးစွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချို့သောငါးအမျိုးအစားတွေကတော့ခန္ဓွာကိုယ်အတွက် ကောင်း ကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကိုသာဖြစ်စေနိုင်တာ ကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်တော်တဲ့ငါးအမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် (၁) ငါးကင်ဆိုင်တွေမှာအများဆုံး အသုံးပြုပြီးတလားဗီးယားလို့ လူသိများကြတဲ့ငါးဟာပရိုတိန်းပါဝင်မှုနည်းပါး သလိုOmega3Fatty Acid